I-blu vivo xi kunye ne-blu vivo xi + zii-brand & apos zeefowuni zokuqala eziqinisekisiweyo
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-BLU Vivo XI kunye ne-BLU Vivo XI + ziluphawu & iiapos zeefowuni zokuqala eziqinisekisiweyo zeVerizon
I-BLU Vivo XI kunye ne-BLU Vivo XI + ziluphawu & iiapos zeefowuni zokuqala eziqinisekisiweyo zeVerizon
Udumo lweeMveliso zeBLU, umthengisi we-smartphone esekwe e-US owaziwa ngokubalula okumangalisayo kunye nokubonakala kwepremiyamu kwezixhobo zayo ezinokufikeleleka, yonakele kakhulu ngenani le amanyundululu abucala edatha kunye uhlaziyo lwesoftware eyintlekele kwilixa elidlulileyo .
Kodwa inkampani ubuye ngobulumko ebuyisa ukubuya zeentlobo, ethembisa ukuguqula iphepha elitsha ngokubhekiselele kukhuseleko kunye nenkxaso yesoftware. Kwaye ngoku iBLU Vivo XI kunye Ndihlala kwiXI + , eyokugqibela eqinisekisiweyo yokufumana ukubuyiswa kwePie ye-Android kungekudala, bafumana isiqinisekiso esisemthethweni seVerizon .
Nangona oko akuthethi ukuba ii-handsets ezimbini ziya kuthengiswa ngokuthe ngqo sisizwe & rsquo; s umboneleli wenkonzo ephezulu ngaphandle kwamacingo, ukusebenzisana kweBLU kunye neRsquo; neBig Red kusekukufezekisa okubalulekileyo.
Uphawu lwempikiswano kunye ne-rsquo; iifowuni ezingavulwanga zihlala zifumaneka kwiiyantlukwano ze-GSM kuphela, zixhasa ngokukodwa ukwenziwa kwenethiwekhi njenge-AT & T kunye neT-Mobile. I-BLU Vivo XI kunye ne-BLU Vivo XI + azikho ngaphandle, kulanda i $ 220 kwaye $ 300 ngokwahlukeneyo kwi-Best Buy ngaphandle konxibelelwano olucacileyo lweCDMA olufunekayo ukuze lusebenzise kwiVerizon okanye iSprint.
Kodwa emva kokuthenga nasiphi na kwezi zixhobo zimbini zivuliweyo, unako ngoku bayise kwelona lizwe liphethe inqwelomoya kwaye wonwabele izibonelelo zenethiwekhi ye-4G LTE ebanzi. I-Vivo XI ekhoyo kunye ne-XI + abanini banokutshintsha baye kwiVerizon emva kokufumana uhlaziyo lwesoftware kunye nokunxibelelana nenkxaso yabathengi ye-BLU & rsquo; yemiyalelo yokuvula.
Ukujoyina i-Big Red & rsquo; s Yiza nenkqubo yakho yesiXhobo ngomnye waba bafana babi ikwenza ukuba ufaneleke ukufumana i-MasterCard eyi-150 ehlawulwa kwangaphambili kunye nekhadi le-SIM lasimahla.
Ayisiyongxaki kakhulu kwi-Android 8.1 Oreo-inikwe amandla i-5.9 kunye ne-6.2-incher eneekhamera ezimbini ezijonge ngasemva eziyi-16 + 5MP, izikena zeminwe ezifakwa ngasemva, izikrini ezinotyekelo olungafakwanga olunee-bezels ezincinci, kunye noyilo olucekeceke ngokungathandabuzekiyo lwamaxabiso abo. Imodeli enkulu iza nomboniso obukhali, inkumbulo ngakumbi kunye nokugcinwa, kunye neprosesa yeHelio P60 ekhawulezayo (xa kuthelekiswa ne-P22 kwiBLU Vivo XI encinci).
Umhla omtsha wokukhululwa kwemotorola
Eyona bhajethi kunye neefowuni ezifikelelekayo ngo-2021: isikhokelo somthengi kunye nesikhokelo
Umhla wokukhutshwa kwe-iPhone XR namhlanje, ukuya kwintengiso ethobekileyo kunye nolayini weApple Store
I-Apple Watch 6 iTitanium Edition: Ngaba kufanelekile ukuyifumana?
Nazi iiapos zendlela yokusebenzisa imouse kwi-iPad yakho, kunye nokuba ithanda ntoni